Ronaldo, Messi, Ozil Iyo Xiddigaha Kale Ee Waa Weyn Ee Hal Horyaal Ku Midoobaya Goor Dhow | Laacibnet.net
Ronaldo, Messi, Ozil Iyo Xiddigaha Kale Ee Waa Weyn Ee Hal Horyaal Ku Midoobaya Goor Dhow
January 13, 2021 Balaleti
Iydoo Lionel Messi iyo Mesut Ozil ay dhawaan sheegeen sida ay u jecel yihiin inay uga ciyaaraan horyaalka Mareykanka, waxay u muuqataa in Mareykanka uu noqonayo meel soo jiidata xiddigaha gaboobay ee ka dheelaya Yurub.
Hadalkooda ayaa noqday mid soo jiita kooxaha Mareykanka iyadoo kooxo dhowr ah ay ku riyoonayaan fekerka ah inay xiddigo waa weyn kala soo wareegaan Yurub.
Radamel Falcao wuxuu ku biiri karaa Inter Miami
Kooxda David Beckham uu dhistay ee Inter Miami ayaa durbaba la saxiixatay Gonzalo Higuain, waxayna doonayaan inay weerarka kula laamaaniyaan Radamel Falcao.
Ozil waa riyada DC United
Kooxdii hore ee Wayne Rooney, DC United ayaa xiiseyneysa xiddiga Jarmalka, waxayna u soo bandhigeen qandaraas. Wuxuu ku biiri karaa xagaaga marka uu dhaco qandaraaskiisa ama haddii uu burburo heshiiska bishaan Janaayo la filayo inuu ugu wareego Fenerbahce.
Messi, xiddig ay cid walba dooneyso
Messi ayaa qirtay inuu doonayo inuu ka ciyaaro horyaalka Mareykanka ee loo yaqaano MLS ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisanin, kooxda New York City FC ayaa ka mid ah kooxaha sida xoogan loola xiriirinayo, laakiin waxay caawinaad ka doonayaan Manchester City kuwaasoo ka caawin kara in Messi uu Mareykanka u gudbo marka uu Etihad ka dhameysto howshiisa.
Luis Suarez wuxuu Messi kula midoobi karaa MLS.
Qandaraaska uu Luis Suarez ku joogo Atletico Madrid wuxuu ku eg yahay sannadka 2022, waxaa jiray xan la xiriirta in Suarez uu ku biirayo kooxda Inter Miami.
Cristiano Ronaldo oo Nani kula midoobi kara Orlando
Cristiano ayaa la sheegay inuu u ku yiri Nani inuu jeclaan lahaa inuu kula biiro MLS, waxay u wada ciyaari karaan kooxda Orlando City oo uu Kaka u soo dheelay.
DEG-DEG: Tirada Kulamada Uu Lionel Messi Ku Maqnaanayo Casaankii Final-ka Spanish Supercoppa Oo La Shaaciyay